२४ घण्टा नपुग्दै”ताराबाजी लै लै”ट्रेनिङमा ! गायक कटुवालले भने ३ करोड ऋण मेरो टाउकोमा छ (भिडियो)::Nepal's Online News Portal
२४ घण्टा नपुग्दै”ताराबाजी लै लै”ट्रेनिङमा ! गायक कटुवालले भने ३ करोड ऋण मेरो टाउकोमा छ (भिडियो)
शनि, बैशाख २८, २०७६
काठमाडौं – नेपाली गितसंगितको क्षेत्रमा एकाएक कहलिएको नाम हो सुनिल कटुवाल । कपुरी “क” गितबाट चर्चाको सिखरमा चडेका गायक सुनिल कटुवालले पहिलो हिमालयन अवार्ड र सोही गितबाट अर्को ओएस अवार्ड हात पार्न सफल भएका थिए । सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै पहिलो पटक ट्रेनिङ ४५ मा आईसकेको छ । अस्ट्रेलिया बसेका गायक सुनिल कटुवाल भन्नुहुन्छ”म गीतसंगीतको विधार्थी हु सिक्दै छु । आम दर्शक स्रोता मेरा भगवान हुन् ,”कपुरी क”गीतलाई जसरि माया गर्नु भएको थियो यो गीतलाई पनि छोटो समयमा उतिकै माया गर्दिनु भएको छ । पूर्ण रुपमा म गायक हुन् सकेको छैन बामे सर्दै छु हिडाउने काम तपाईहरु गीतसंगीत प्रेमी सवैको हात छ । म ३ करोड नेपालीको ऋणी छु म तिर्न सक्दिन होला तर म बिर्सने पनि छैन ।”
“तारा बाजि लै लै”बजारमा आए लगतै छोटो समयमा नै चर्चाको शिखरमा चडेको छ । प्रदिप लामाको प्रस्तुति रहेको उक्त गितको उत्कृष्ट शब्द तथा संगित भिम बिसिको रहेको छ । प्रमोद भण्डारीको निर्देशनमा रहेको म्युजिक भिडियोलाई प्रदिप लामा र प्रमोदले छायाकन गरेको म्युजिक भिडियोलाई पवन सुस्लिंङले सम्पादन गरेका हुन् । प्रदिप लामा र कबिता नेपालि सहित “द नेक्स्ट टिम”ले दमदार अभिनय गरेका छन । पप गायक सुनिल कटुवाल र एन्जिला रेग्मीको सुमधुर स्वरमा रहेको उक्त गितको निर्देशन प्रदिप लामाले गरेका गरेका छन ।
“द नेस्ट टिम”अफिसियल युटुबबाट सार्वजनिक गरेको यो गित सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नपुग्दै चर्चा बटुल्न सफल भएको छ । बधाई अनि विशेष धन्याबाद बिजय कटुवाल किरन भन्डारी र श्री पराजुली सहित शुभकामना यो गितको सम्पुर्ण टिमलाई ।
काठमाडौं – नेपालि गीतसंगीतको दुनियामा थ्रिपिस च्यानलको प्रस्तुती पारस थापा क्षेत्रीको सुमधुर शब्द संगीत तथा स्वरमा लोक दोहोरि गित”जहाज उड्यो आकाशमा”सार्वजनिक भएको छ । थ्रि पिस च्यानलको प्रतुतिमा जेसिका ईनटरटेनटमेनटको दृश्य निर्माण भएको “जहाज़...
फेरि आयो शिव हमाल र बिमल अधिकारीको सबैलाई रुवाउने लोक दोहोरी भिडियो सहित….
फेरि आयो शिव हमाल र बिमल अधिकारीको सबैलाई रुवाउने लोक दोहोरी भिडियो सहित…. भिम लुहार मलेशिया मलाका पछिल्लो समय माया गर्ने तरिका फेरिए संगै बोलीचाली ब्यवहार फेरिएको प्रसस्त घटनाहरु छन् । यस्तै एउटा घटना घटेका छन्...
दिपेन्द्र राईको बेल्टार सँगै पुर्बेली गित सार्बजनिक भिडियो सहित)
दिपेन्द्र राईको बेल्टार बजार सँगै सार्बजनिक भिडियो सहित) भिम लुहार मलेशिया गायक दीपेन राई र गायिका सुनिता थेगीमको स्वरमा रहेको पुर्बेली लोकदोहोरी गीत” बेल्टार बजार”सार्वजनिक भएको एक हप्तामै श्रोता दर्शकको मन जित्न सफल ।भुइदल अल्लारेको...
कपुरी”क”गीतबाट फट्को मारेका सुनिल कटुवालले”तारा बाजि लै लै”नामक गित बजारमा ल्याउने अन्तिम तयारीमा
बङ्गालको खाडीमा बनेको समुद्री आँधीले कुन देशमा कति क्षति ?
काठमाडौँ । शक्तिशाली समुद्री आँधी फानी शुक्रवार बिहान भारतको तटवर्ती राज्य ओडिशाको स्थल क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ ।बङ्गालको खाडीमा बनेको सो समुद्री आँधी झन्डै २०० किलोमिटर प्रतिघण्टाको वेगले अघि बढिरहेको छ। आँधीको प्रभावले त्यहाँ...
काठमाडौं, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमका प्रवक्ता तथा पाइलट विजय लामालाई निलम्बन गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले स्पष्टिकरण सोधेर लामाको लाइसेन्स सस्पेन्ड गरेको हो । एयरलाइन्सको दुबई उडान क्यान्सिल भएपछि लामाले...